Iresiphi yekhephu ebomvu yeklasikhi ebomvu + itshizi yetshizi ebandayo - Ikhekhe
Ikhekhe elibomvu lekhekhe elibomvu
Iresiphi yeklasikhi ebomvu yeklasikhi ebomvu eyenziwe ngebhotoloya kunye neviniga yelavani ebomvu yinyani ebomvu
Oku Iresiphi ebomvu yekhekhe ebomvu yile nto ikeyiki ebomvu ye-velvet ebomvu yokwenyani ekufuneka ingcamle ngayo! Yongezwa nge cream cream sisi , Ndaye ndacinga ukuba kutheni abantu BAYITHANDA ikeyiki ebomvu ebomvu yokwenyani. Le khekhe yibhotolo, ithambile kwaye iphila ngokwenyani kwinkcazo yevelvet. Le khekhe nayo idibene kakuhle Ukuqhawula iqabaka okanye eyam I-buttercream elula .
Le recipe ihlaziywa kwiresiphi yangaphambili endikhe ndayisebenzisa kwaye amaxesha angcono sisigidi! Yiloo nto ebhaka, uhlala ufunda kwaye uphucula. Ndifuna iresiphi ebomvu yekhekhe ebomvu eyayingummangaliso weklasikhi kwaye yayingeyiyo nje ikhekhe levanilla enombala wokutya owongeziweyo (yuck). Ndivavanye leresiphi kumthengi oyithandayo ikhekhe ebebomvu yayinevelvet ebomvu kwaye wathi yeyona nto ibalaseleyo awakhe wanayo ndicinga ukuba yimpumelelo leyo.
indlela yokugcina amaqunube amatsha esitsha
Ngaba velvet ikeyiki ebomvu iresiphi yekhekhe yetshokholethi enemibala ebomvu yokutya?
Ikhekhe ebomvu ye-velvet ayisiyo ikeyiki yetshokholethi enombala wokutya obomvu kuphela. Ngapha koko, ikeyiki ebomvu ebomvu yafumana igama layo ngenxa yokuba ibhotolo yebhotolo kunye neviniga ngokwendalo zikhupha izandi ezibomvu ezikwipowcoa, zinika ikeyiki umbala obomvu. I-Buttermilk kunye neviniga ikwaphula i-gluten kumgubo obangela ikhekhe lethenda ngakumbi kusenokwenzeka ukuba yafumana igama lesidlaliso elibomvu velvet.
Ewe kule minyaka idlulileyo kufakwe umbala wokutya obomvu omncinci ukuze uqinise umbala kwinto esiyibonayo namhlanje, yiyo loo nto abantu benokudideka malunga nokuba incasa yeresiphi ebomvu yenyani ebomvu imele ukuba yintoni. Abanye ababhaki abangenamava banokufaka nje umbala obomvu wokutya kwikhekhe levanilla. Ukutya okuBomvu umbala okunene kunencasa okrakra kakhulu ke ukuba wakhe wanayo iresiphi yekhekhe ebomvu ye-velvet ebomvu, inokuba ingcamle kakubi kakhulu.
Ngaba injani iresiphi yekhekhe ebomvu ebomvu yokwenene?
Iresiphi yekhekhe ebomvu ebomvu yokwenyani yenziwa ngebhotolo, iviniga kunye nentwana yecocoa powder. Ezi zithako zikhokelela kwikhekhe elimbejembeje elinekalika yetshokholethi. Le yindibaniselwano entle entle ekhethekileyo kodwa xa usongeza kwenye i-cream cream frosting okanye ermine ukubanda (ikhephu ebandayo yekhekhe ebomvu yevelvet), emva koko yongeza incasa engakumbi nangakumbi. Le tangy flavour luphawu lweresiphi yenyani ebomvu ebomvu yokwenyani.
Kutheni le nto ikeyiki ebomvu yevelvet isithandwa esithandwayo?
Ngokwam ndicinga ukuba ikeyiki ebomvu ye-velvet ithandwa ngenxa yezinto ezimbini. Abanye abantu baye bafumana iresiphi ebomvu yenyani ebomvu kwaye bayayithanda! Andibasoli, kumnandi ngokwenene. Enye into kukuba incasa yekhekhe ephikisayo kakhulu. Ukuba awuzange ube nekhekhe ebomvu ebomvu kwaye udibanisa ikhekhe kunye nekhekhe ebomvu ebomvu ke awuyi kubona into ebalulekileyo.
Nanini na xa kukho impikiswano phakathi kwento elungileyo okanye hayi, ihlala ithandwa ngakumbi. Kukho intetho kubugcisa, ukuba ilungile ngoko abantu baya kuyithanda okanye bayithiye. Ukuba wonke umntu uziva nje 'ok' malunga nayo, ke ngu-meh nje. Ngokufanayo nekhekhe, abantu babonakala ngathi bayayithanda okanye bayayithiya ikhekhe ebomvu yevelvet.
kwenzeke ntoni ku dave chappelle yahoo
Iresiphi elula yekhekhe ebomvu
Kulungile, oku kuphela kweresiphi yekhekhe endiyenzayo yindlela enye yesitya. Ngokwesiqhelo ndikhetha eyona ndlela ichanekileyo yokuxuba njengendlela yokubuyela umva. Iresiphi ebomvu yekhekhe ebomvu i-soooo ilula kakhulu!
Dibanisa umgubo, iswekile, umgubo wecocoa, ityuwa kunye nesoda yokubhaka kwisitya.
Hlanganisa amaqanda, ioyile yemifuno, ibhotolo, ibhotolo enyibilikiweyo, iviniga, ivanilla kunye nombala kwisitya esahlukileyo.
Kancinci kongeza kwizithako ezimanzi kwindawo eyomileyo kwaye udibanise umzuzu omnye. Unokwenza oku ngesandla okanye kumxube wokuma kunye nesinamathiselo sephedi.
Thela ibhetri kwiipani ezimbini zekhekhe ezijikeleziweyo kunye nokubhaka!
Ndiyathanda iqabaka ndigcwalise ikeyiki yam ngekrimu yesonka samasi emva koko ndisebenzise ezinye zeekhekhe zokucheba (ekususeni idome) ukwenza ikhekhe entle yokutyabeka ngaphandle. Gcoba nge tshokholethi emhlophe encinci kunye ne-boom! Leyo ikeyiki entle ebomvu ebomvu.
Uyenza njani ikeyiki ebomvu yomaleko ikeyiki kunye noshizi okweqanda
Emva kokuba iikeyiki zam zibhakekile kwaye ndiye ndaziyeka zaphola, cutha izindlu zekhekhe lakho ukuze zenziwe zicaba. Beka umaleko wakho wokuqala kwibhodi yekhekhe okanye kwipleyiti enkulu ethe tyaba.
Yongeza i-scoop enkulu ye-cream cream yakho kwaye uyisasaze kwi-cake layer usebenzisa i-spatula ye-offset. Ndenza iqabaka yam malunga ne-1/4 ″ ubukhulu. Emva koko faka olunye uluhlu lwekhekhe phezulu. Phinda uluhlu lokugqibela.
Ukusabalalisa ngaphezulu kweqabunga lakho kwinqanaba elincinci kwinqanaba lekhekhe. Oku kubizwa ngokuba yingubo etyhidiweyo kunye nokutywina ngokoqobo kuzo zonke iimvuthu ukuze zingangeni kwidyasi yakho yokugqibela yeqabaka. Friza ikhekhe kangangemizuzu engama-20 ukuze uqinise idyasi.
Yongeza olunye ungqimba lwebhotoloyitha kwikhekhe lakho elibandayo kwaye ugudise ngesitena okanye nge-spatula esetiweyo. I-turntable inceda kakhulu kule nkqubo.
Emva koko, yiphule indlu yakho yekhekhe uze uyongeze phezulu kwikhekhe lakho kunye namacala njengomhlobiso.
Gqibezela ikeyiki yakho kunye nodoli abancinci bebhotoloyidi ejikeleze umda wangaphandle! Konke kwenzekile!
Imibuzo ebuzwa rhoqo malunga nale recipe ebomvu yevelvet
Ngaba le recipe inokwenziwa iikeyiki? -Ewe ungayisebenzisa ngokuqinisekileyo leresiphi yeekeyiki. Ndizenzile amatyeli amaninzi kwaye ziphume kakuhle. Bhaka imizuzu emi-5 ngo-400ºF uze unciphise ukuya kuma-350ºF kangangemizuzu eli-10-15 okanye de kubekwe iikeyiki embindini. Sukugcwalisa ii-liner zekhekhe ngaphezulu kwe-2/3 yendlela epheleleyo okanye ziya kuphuphuma zize ziwe.
Abadlali abalishumi abalungileyo bebhasikithi ngalo lonke ixesha
Ndingayisebenzisa ntoni xa ndingenalo ubisi lwebhotolo? -Ungasebenzisa isixa esilinganayo (ngokobunzima) bukhrim omuncu okanye ungongeza i-1 Tbsp yeviniga kubisi oluqhelekileyo kwaye mayiyihlale imizuzu embalwa de iqale ukujija ukwenza ibhotolo yasekhaya.
Ndingawushiya umbala wokutya obomvu? Ewe unako kodwa ikeyiki ayizukuba bomvu kakhulu ngaphakathi.
Iresiphi yekhekhe ebomvu ebomvu emangalisayo. Isitya esinye, i-spatula enye, ikeyiki enye emangalisayo! Ikhekhe likhanya kakhulu kwaye libuthathaka kwaye lifumile kakhulu. Iyahamba kakuhle nge-cream cream frosting okanye i-ermine buttercream! Ixesha lokulungiselela:10 imiz Ixesha lokupheka:30 imiz Ixesha lilonke:40 imiz Iikhalori:446kcal
Izithako zekhekhe ebomvu
▢14 iiununci (397 g) Umgubo we-AP
▢14 iiununci (397 g) Iswekile enkulu
▢Mbini Iicephe (Mbini Tbsp) cocoa umgubo
▢1 icephe (1 tsp) ityuwa
▢1 icephe (1 tsp) Isoda yokubhaka
▢Mbini inkulu (Mbini) amaqanda Igumbi temp
▢4 iiununci (114 g) amafutha emifuno
▢8 iiununci (227 g) ubisi lwebhotolo Igumbi temp
▢1 Iicephe (1 Tbsp) iviniga emhlophe
▢6 iiununci (170 g) ibhotolo engenatyiwa iyanyibilika kodwa ayishushu
▢1 iitispuni (1 tsp) ivanilla
▢1 Isipuni (1 Tbsp) umbala obomvu wokutya Ndikhetha i-americolor ebomvu ebomvu kuba ayinangcamlo
I-Cream Cheese Frosting Izithako
▢12 iiununci (340 g) icwambu lesonka samasi ithambile
▢8 iiununci (227 g) ibhotolo engenatyiwa ithambile
▢1/2 icephe (1/2 tsp) isicatshulwa seorenji
▢1/4 icephe (1/4 tsp) ityuwa
▢26 iiununci (737 g) ushukela ocoliweyo kuhluzwa
Imiyalelo yeCake yeVelvet ebomvu
Ukucwilisa i-oven ukuya kuma-350F kwaye ulungiselele iipani ezimbini zekhekhe ezi-8 okanye iipani zekhekhe ezi-6 nge-goop ye-cake okanye i-pan spray. Qinisekisa ukuba izithako zakho ezibandayo zonke ngamaqondo obushushu egumbi. Jonga amanqaku ezantsi kweresiphi yeenkcukacha.
Khawuleza udibanise amaqanda egumbi lakho lobushushu, ioyile, ibhotolo, iviniga, ibhotolo enyibilikileyo, ivanilla kunye nokutya okubalabalayo kwaye ubeke bucala.
Hlanganisa umgubo, iswekile, isoda yokubhaka, umgubo wecocoa kunye netyuwa kwisitya somxube wakho wokuma
Yongeza umxube weqanda kumxube wakho womgubo uze uxube kwisantya esiphakathi malunga nomzuzu de udityaniswe
Yahlulahlula i-batter kwiipani zekhekhe kwaye ubhake malunga nemizuzu engama-35-40 okanye de kube kuphume i-toothpick icocekile. Iipereyiti ngokugqibeleleyo kunye nebhotoloyisi yethu yamasi cream.
Imiyalelo yeCream Cheese Frosting
Beka ibhotolo ethambileyo kwisitya somxube wakho wokuma kunye nesincamathisi se-whisk kunye nekhilimu ezantsi kude kube lula kwaye akukho ziqhuma.
Beka itshizi ethosiweyo kwisitya kunye nebhotolo kwiziqwengana ezincinci kunye nekhilimu ezantsi kude kube lula kwaye kudityaniswe
Yongeza kwi-sifted powdered powder enye indebe enye de udibanise, udibanise phantsi
Yongeza isicatshulwa sakho seorenji kunye netyuwa
Frost ikhekhe lakho elipholile njengoko unqwenela kwaye usebenze kwiqondo lokushisa. I-Cream cheese frosting kufuneka ifrijiwe kude kube ziiyure ezimbalwa (2-3) ngaphambi kokuba kunikezelwe ikhekhe.
Izinto ezibalulekileyo ekufuneka uziqaphele ngaphambi kokuba uqale 1. Yiza nazo zonke izithako zakho ubushushu begumbi okanye ushushu kancinci (amaqanda, ibhotolo, ibhotolo, njl) ukuqinisekisa ukuba ibatter yakho ayophuli okanye ijike. 2. Sebenzisa isikali ukuya linganisa izithako zakho (kubandakanya ulwelo) ngaphandle kokuba kuyalelwe ngenye indlela (iicephe, iitispuni, pinch njlnjl). Imilinganiselo yeetriki ifumaneka kwikhadi leresiphi. Izithako ezilinganisiweyo zichanekile ngakumbi kunokusebenzisa iikomityi kwaye zincede uqinisekise impumelelo yeresiphi yakho. 3. Ziqhelanise neMise en Indawo (yonke into ekuyo). Linganisa izithako zakho ngaphambi kwexesha kwaye uzilungiselele ngaphambi kokuba uqale ukuxuba ukunciphisa amathuba okushiya ngempazamo okuthile. 4.Phola iikeyiki zakho ngaphambi kokubandayo kunye nokuzalisa. Unokugubungela ikhekhe eliqingqiweyo nelibandayo kwifondant ukuba unqwenela. Le khekhe ikwalungele ukufakwa. Ndihlala ndizigcina iiqebengwana zam zibandisiwe kwisikhenkcisi ngaphambi kokuba zithunyelwe ukulungiselela ukuhanjiswa ngokulula.
Ukukhonza:1ukukhonza|Iikhalori:446kcal(22%)|IiCarbohydrate:59g(Amashumi amabini%)|Iprotheni:3g(6%)|Amafutha:22g(3. 4%)|Amafutha agcweleyo:Shumi elinantlanug(75%)|Icholesterol:54mg(18%)|Isodium:305mg(13%)|Potassium:59mg(Mbini%)|Iswekile:Isineg(Amashumi amahlanu%)|Vitamin A:480IU(10%)|Ikhalsiyam:32mg(3%)|Intsimbi:1mg(6%)
facebook ithatha njani isigqibo sokuba ngabaphi abahlobo abanokubonisa kwiphepha leprofayile
U-tomi lahren utshabalalisa u-trevor noah ngaphezulu kwe- # blacklivesmatter
Ngaba amaqanda acocwe kwivenkile
ungenza ntoni ngentlama emnandi
Uyenza njani ibhokisi ye-velvet ebomvu ebomvu enencasa yasekhaya